Volavolana tetiandon'ny CENI :: Hotontosaina ny 27 mey 2019 ny fifidianana depiote • AoRaha
Volavolana tetiandon’ny CENI Hotontosaina ny 27 mey 2019 ny fifidianana depiote
Hatao raha afaka efa-bolana. Araka ny fangatahana nataon’ny governemanta dia navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly, ny volavolana tetiandro hanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka. Raha tsy misy ny fiovana dia ny alatsinainy 27 mey 2019 no hanatanterahana ny latsa-bato hifidianana an’ireo depiote handrafitra ny Antenimierampirenena.
Voafaritra ao anatin’ity tetiandro vonjimaika ity fa ny 26 febroary 2019 ho avy izao no hisokatra ny fandraisana ny antontan- taratasin’ireo kandidà hirotsaka amin’io fifidianana io. «Haharitra dimy ambin’ny folo andro ny fe-potoana fandraisana an’ireo antontan-taratasy ireo, ka ny 12 marsa 2019 no hifarana tanteraka », hoy ny fanampim-panazavana noentin’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, tetsy Alarobia.
Hanomboka ny 6 mey 2019 kosa ny fampielezan- kevitra ho an’ireo kandidà solombavambahoaka. Iraika amby roapolo andro ny faharetan’izany, ka hifarana ny 25 mey 2019. Folo andro mialoha an’io andro hifaranan’ny fampielezan-kevitra io, izany hoe ny 15 mey kosa no hikatona tanteraka ny lisi-pifidianana hampiasaina amin’ny fifidianana an’ireo depiote.
Anto-bola 5 tapitrisa ariary
Araka ny vinavinan’ny Ceni dia ny 17 jona 2019 no hanambaràna amin’ny fomba ôfisialy ny voka-pifidianana vonjimaika. Isan’ny nangatahan’ ny governemanta tamin’ ireo mpikambana eo anivon’ity rafitra ity ny famaritana ny anto-bola tokony haloan’ireo kandidà ho depiote. Noferan’ny Ceni ho 5 tapitrisa ariary isak’ireo kandidà izany.
« Eny amin’ny rantsa-mangaikan’ny Ceni, isaky ny distrika (CED) no hametrahana an’ireo antontan-taratasy firotsahan- kofidiana. Eny amin’ny CED ihany koa no hatao ny antsapaka handaharana ireo kandidà ao anaty biletà tokana», araka ny fanazavana nomen’ny filoha lefitry ny Ceni, hatrany.
Niova tsy toy ny mahazatra fa alatsinainy no andro nosafidian’ny Ceni hanatanterahana ny fifidianana depiote. Nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni fa “ antony iray nahatonga an’izany ny fanokanana andro roa mialoha hanomanana ny latsa-bato amin’io andron’ny 27 mey io”.
« Nahitana olana kely ny andro alarobia teo aloha, ka izay no antony nanaovana azy ho alatsinainy, mba hahafahana mametraka ara-potoana an’ireo fitaovana hampiasaina amin’ny fifidianana », hoy izy.
Antenimierampirenena :: Anio ny ny fandaniana na tsia an’ireo lalàna roa